एक नम्बर विकास बैंक बन्दै गरिमा विकास बैंक ! छोटो इतिहासमै ठूलो उछाल - नेपालबहस
एक नम्बर विकास बैंक बन्दै गरिमा विकास बैंक ! छोटो इतिहासमै ठूलो उछाल
| १३:२६:१६ मा प्रकाशित
१५ माघ, काठमाडाैं । गरिमा विकास बैंकले विगत लामो समयदेखि आकर्षक व्यापार गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को दोश्रो त्रैमासमा पनि आकर्षक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दै अधिकांश सूचक सकारात्मक देखाएको छ । खुद मुनाफामा २१ प्रतिशत माथि वृद्धि गर्न सफल बैंकले निक्षेप तथा कर्जामा पनि आकर्षक वृद्धि गर्न सफल भएको छ ।
निक्षेप र कर्जा दुवैमा २५ प्रतिशत माथिको वृद्धि हुनुले बैंकको भविष्य राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै बैंकको जगेडा कोष पनि बलियो हुँदै गएको छ । किताबी मूल्य करिब १५० पुग्नुले बैंकको सम्पत्ति वृद्धि हुँदै गएको देखिएकाे हाे ।
धेरै विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकसँग मर्जर वा एक्वायरमा गएको अवस्थामा गरिमा विकास बैंकले भने वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सफलताकाे बाटाेमा अगाडि बढेकाे देखिन्छ । रिटर्न्स अफ इक्युटी १६ प्रतिशतमाथि हुनुले बैंक व्यवस्थापन सफल भएको छ ।
कम्पनीले माघ ३० गते पोखरामा आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्दै १३ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शुन्य दशमलव ७१ प्रतिशत नगद लाभांश गरी जम्मा १४ दशमवल २१ प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव पारित गर्दैछ । साधारणसभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोज भैसकेको अवस्था छ ।
विकास बैंक सञ्चालक समिति:
यस बैंककाे हाल संचालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रकान्त बराल छन् भने संचालक समितिका सदस्यहरूमा श्यामप्रसाद बस्याल, भीम पाण्डे, डा. भुपेन्द्रबहादुर खडका, संजिव ढकाल र स्वतन्त्र संचालकमा कुञ्जराज थापा छन् ।
त्यस्तै बैंक उच्च व्यवस्थापनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोविन्दप्रसाद ढकाल छन् भने नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा माधवप्रसाद उपाध्याय आर्चाय रहेका छन् ।
क्षेत्रीयस्तरमा पोखराबाट २०६४ सालबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको बैंकले आफुलाई स्थापित गर्न ठूलो समय लागेन । निलगिरी विकास बैंकसँगको मर्जर पश्चात २०७२ सालमा बैंक रास्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भएको थियो । बैंकले हाल नेपालका २६ जिल्लाबाट कारोवार गर्दै आएको छ ।
विकास बैंक उच्च व्यवस्थापन टीम:
कस्तो आयो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ दोश्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन :
गरिमा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमास अर्थात ६ महिनाको अवधिमा ३९ करोड ३५ लाख खुद मुनाफा गरेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्ममा विकास बैंकले ३२ करोड ५५ लाख खुद मुनाफा गरेको थियो । यसरी खुद मुनाफामा २१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।
प्रमुख आम्दानीको श्रोत (खुद व्याज आम्दानी):
अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा कम्पनीले ८० करोड ६० लाख खुद व्याज आम्दानी गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ८४ करोड २६ लाख खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । यसरी खुद व्याज आम्दानीमा ५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, संचालन मुनाफा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ५६ करोड २२ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको दोश्रो त्रैमासमा कम्पनीले ४६ करोड ५० लाख संचालन मुनाफा गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म बैंकले ७ करोड ९९ लाख रकम जोखिम बापत व्यवस्थापन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म बैंकले सो सिर्शकमा १८ करोड ४८ लाख व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ३१ पैसा हुन आउँछ । कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी गणना गर्दा ३ अर्ब २३ करोड पुँजीमा गरेको र कम्पनीले १३ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गरेको अवस्थामा कम्पनीको पुँजी ३ अर्ब ६७ करोड हुनेछ। उक्त पुँजीलाई समायोजन गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ४१ पैसा हुन्छ।
नोट : माघ १५ गतेको बजार मुल्यको आधारमा
कम्पनीको किताबी मूल्य ( प्रतिशेयर नेट्वर्थ) १४८ रुपैयाँ आउँछ ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म ५३ अर्ब ५ करोड निक्षेप संकलन गरी ४४ अर्ब १६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्त र अहिलेको तथ्यांकलाई दाँजेर हेर्दा कम्पनीले काेराेना कहरका बीचमा पनि निक्षेप संकलन २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जगेडा कोषको अवस्था :
जगेडा कोष ३१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ८३ करोड ३९ लाख पुगेको छ भने संचित मुनाफा ५४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७२ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
निस्क्रिय कर्जा :
कम्पनीको खराब कर्जा शुन्य दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा खराब कर्जा शुन्य दशमलव ३९ प्रतिशत थियो । बैंकले खराब कर्जा १ प्रतिशत भन्दा मुनी राख्न सफल भएको छ।
आधार व्याजदर :
बैंकको आधार व्याजदर केही घट्दै ८ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
व्याजदर अन्तर ४ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा स्प्रेडदर ५ दशमलव २६ प्रतिशत थियो ।
बैंकको सीसीडी अनुपात ८० नजिक रहेको छ। अन्य बैंकलाई अधिक तरलताको समस्या भएको बेला गरिमा विकास बैंकले निक्षेप संकलनको वृद्धि प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको व्यापारलाई कोरोनाले नरोकेको देखिन्छ । अन्य केही विकास बैंकले सम्पत्ति बेचेर आकर्षक मुनाफा देखाएकोमा यस बैंकले यस त्रैमाससम्म गैरसंचालन आम्दानी गरेको देखिदैन् ।
यसरी बैंकले “कोर बैकिङ” काम गरेर नै नाफा देखाएको देखिन्छ । आधार व्याजदरमा कमी आएको छ । आधार व्याजदर कमी आउँदा ऋण लगेका ग्राहकलाई केही राहत भएको छ । स्प्रेडदर पनि ५ प्रतिशत भन्दा मुनी ल्याउन बैंक सफल भएको छ । कोरोना कहरका बीचमा पनि खराब कर्जा १ प्रतिशत भन्दा मुनी राख्न बैंक व्यवस्थापन सफल भएको छ । समग्रमा हेर्दा बैंक एक नम्बर विकास बैंक बन्न पूर्ण रुपमा तयार भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्र चैत १ गतेदेखि निष्कासन हुँदै, ब्याजदर कति ? ५७ मिनेट पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ फागुन २३ गते आइतबारदेखी फागुन २९ गते शनिबारसम्मको ] ३ घण्टा पहिले
चीनले अरब लिगलाई कोभिड–१९ को खोप उपलब्ध गरायो १७ घण्टा पहिले
विश्व बैंकको ५६ करोड अनुदान पुतलीबजार नगरपालिकालाई २० घण्टा पहिले
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिए ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने २४ घण्टा पहिले
अफगानिस्तानको हवाई कारबाहीमा २३ लडाकू मारिए ३ दिन पहिले
काभ्रेबाट चन्द नेता बाँस्तोला रिहा २ दिन पहिले
खोप लगाउन सहज पार्ने उद्देश्यले भवन निर्माण २ दिन पहिले
गोदावरी सडक चार वर्षमा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत २ दिन पहिले
सामुदायिक वनमा आगलागी, स्थानीयवासी चिन्तित ५ दिन पहिले
बृहत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार मार्चपास गर्ने ४ हप्ता पहिले
कुमारी बैंकले ८ करोड इकाई ‘कुमारी ईक्वीटी फण्ड’ निष्कासन गर्दै ३ हप्ता पहिले
शनिबारसम्म देशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको पूर्वानुमान १ हप्ता पहिले
पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा ११ वर्षमा १३० किलोमिटर ट्र्याक ४ हप्ता पहिले
भारतमा पहिलो पटक महिलालाई मृत्युदण्ड दिने तयारी ३ हप्ता पहिले
शेयर बजार, नेप्से पुनः ओरालो १ वर्ष पहिले
नेपाली स्याट–१ ले असार २ देखि पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने २ वर्ष पहिले
झरनामा पर्यटन आवागमनमा रोक ८ महिना पहिले
कोरोनाको प्रभावले मादल बनाउने पेशा थप सङ्कटमा ४ महिना पहिले